Barnaamijyada casho ee far-leefidda; Maanta, myTaste | Androidsis
Barnaamijyada casho ee far-farida; Maanta dhadhankeyga
Mar kasta oo aan ka hadalno codsiyada cuntooyinka ku jira qeybta Codsiyada ee cashada Oo markaan faraha leefleeqnay waxaan nimid gabagabadii in isdhexgalka la hagaajiyo si looga dhigo mid soo jiidasho leh isticmaalaha. Iyada oo halyeeyga maanta, wax walba isbeddelaan, laakiin sidoo kale waa run in shaqadeeda ay qabato. Xaqiiqdii, halkii aad ka ahaan lahayd barnaamijka cuntada, waa codsi lagu keydiyo dhammaan cuntooyinka aad ka fikiri karto. Ma xiisaynaysaa mawduuca? Maanta waxaan kuu soo bandhigeynaa myTaste.
myTaste waa codsi Taas oo aad ku badbaadin karto wax kasta oo ka kooban bog kasta oo internetka ah oo aad ka fikiri karto. Taasi waa, dhadhankeyga malahan cunnooyin iyaga laftooda ah, laakiin waxyaabaha kujira ma xadidna maxaa yeelay waad ku dari kartaa meel kasta. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad ku isticmaali kartid Isbaanish haddii aad taqaanid boggag badan oo noocan ah, laakiin sidoo kale waxaad ku sharxi kartaa iyaga luqado kale haddii aad ku dhiirratid inaad la kulanto mid kale oo ka mid ah ujeeddooyinka ugu caansan bilowga sanadka. Hoos waxaan ku falanqeyneynaa wax yar oo qoto dheer xulashooyinka ugu wanaagsan ee barnaamijkan maanta.
1 myTaste: waa barnaamij ka duwan
1.1 Faa'iidooyinka iyo khasaaraha:
2 Fikirka Tafatiraha:
myTaste: waa barnaamij ka duwan
Cunnooyinka dhadhanka macaan
Developer: myDhanaan AB
Dhab ahaantii gudaha qaybteena dhadhanka dhadhanka Waa kan ugu horreeya ee codsiyada aan ku falanqeyno noocan, kaas oo aan ku aragno barnaamij cunto-karin ah oo aan lahayn cunnooyin ka roon kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, waxa aan ugu jeclahay waa xaqiiqda dhabta ah ee ay ku soo bandhigeyso waxyaabaha ku jira soo jiidasho, baashaal, fududahay in la fahmo iyo waliba dareen macquul ah oo ku dhiirrigeliya adeegsadaha inuu ka faa'iideysto moobiilkiisa kariyaha. Runtu waxay tahay inaan tan maalin walba la helin, markaa waxaan ka helnaa mid ka mid ah kuwa runtii u qalma.
Waxaa laga yaabaa in loo baahan yahay in la yiraahdo helitaanka barnaamijkan macnaheedu maahan inaad haysatid cuntooyinka, iyo haddii aad jeceshahay inaad wax walba diyaar ahaato, markaa barnaamijkani adiga maahan. Laakiin, waxaas oo dhami dhab ahaan waa xigashooyin sababtoo ah way jiraan qaaciidooyinka loo isticmaalo myTaste adigoon u baahnayn inaad booqato dhammaan boggaga internetka iyo baloogyada aad ka fikiri karto adduunka wax karinta. Dareenkaas, waxyaabaha ay ku keydsan yihiin adeegsadayaasha arjiga waa laga soo guurin karaa dadka kale. Taasi waa, adeegsadayaashu waa qayb ka mid ah bulshada la wadaagi kara waxyaabaha ay jecel yihiin kuwa kale, kuwa kalena way falanqeyn karaan iyagoo galaya astaamahooda. Markaa haddii asxaabtaadu sidoo kale yihiin taageerayaal wax ku karsada Android, waxaan u maleynayaa inaad wax wadaagi doontaan adoo isku dayaya barnaamijkan. Dabcan, ka dib cidina kama cabaneyso haddii cuntooyinka shirarka ay aad isugu egyihiin midba midka kale.
Ugu dambeyntii in kastoo myTaste maahan wax ka badan akhristaha maaddada Iyada oo leh qaab rafcaan leh, waxay ku dari lahaayeen xoogaa dheeri ah oo dadka isticmaala ay wax badan ka heli karaan. Dareenkaas, waa run inay ku dari kari lahaayeen waxyaabo sahlay howlaha jikada oo markaa ka dhigaya xitaa mid soo jiidasho leh. In kasta oo cilladani jirto, waxaan kugu martiqaadayaa inaad fiiriso dib u eegista buuxda:
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha:
Runtii interface indho qabasho leh
Sawirada si aad ah loo cusbooneysiiyay oo la jaan qaadaya noocyadii ugu dambeeyay ee Android
Tayo aad u wanaagsan marka aad u wadaagaysid qaababka qaabab kala duwan
La'aanta wax u gaar ah
Waxaad ubaahantahay inaad gasho shabakada si aad uhesho soo jeedin cusub
La'aanta siyaado ah ee kujira arjiga
Dib u eegida: Cristina Torres sawir-haye
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada casho ee far-farida; Maanta dhadhankeyga